कुमार पौडेलको गोली हानी हत्या, पार्टीद्वारा क्रान्तिबाटै बदला लिने चेतावनी
काठमाडौँ : नेपालक म्युनिस्ट पार्टीले पार्टीका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज तथा जनकपुर ब्युरो सदस्य कुमार पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेपछि हात र टाउकोमा गोली प्रहार गरी हत्या गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीका जनकपुर ब्युरो इन्चार्ज अरुणले बिहीबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै पौडेललाई सहिद घोषणा गरेका छन् ।
ब्युरो इन्चार्ज अरुणको विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टीका जुझारु एवम् कर्तव्यनिष्ठ कमरेड कुमार पौडेलको बलिदानले पार्टी र आन्दोलनलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । हामी शोकसन्तप्त परिवारजन र पार्टी पङ्क्तिप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछौँ । हाम्रो पार्टी सहिदहरूको बलिदान खेर जान नदिने साथै एकीकृत जनक्रान्ति सफल गरिछाड्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछ ।
सिन्धुपाल्चोक बस दुर्घटना अपडेट : मृतकको संख्या १५ पुग्यो, ६ को सनाखत (नामसहित)
प्रधानमन्त्रीका कार्यकर्तालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन चलखेल !
पीपीएल टि ट्वान्टी: पोखराको विजयी सुरुवात
‘इण्डियाभन्दा आइडिया ठूलो’
प्याजले फेरिएको भाग्य,एक महिनामै करोडपति !
कांग्रेसका सर्बहारा नेता सुशील कोइरालाको जीवनयात्रा !
यस्तो भइरहन्छ ​पुलिसमा !
अब देखि पुरुषले कोही महिलासँग बोल्नै भएन !
बिप्लवको नजरमा 'केपी - प्रचण्ड सामाजिक दलाल बन्नुका ६ विशेषता ५ कारण' !